Degso Fly Simulator loogu talagalay Windows
Degso Fly Simulator
Degso Fly Simulator,
Fly Simulator waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay jilitaan duulimaad oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato daqiiqado madadaalo ah kaligaa iyo khadka tooska ah ciyaartoy kale.
In Fly Simulator, oo ah ciyaar jilitaan aad u xiiso badan, ciyaartoydu waxay marti u yihiin makhaayad cunto degdeg ah. Ciyaarta dhexdeeda, waxaad ku beddeli kartaa qof adeeg ah oo ka shaqeeya makhaayaddan ama duuliye haddii aad rabto. Iyada oo ku xidhan dhinaca aad doorato, waxaad samaynayso ayaa is -beddeli doona. Markaan noqonno karasniek, waxaan isku daynaa inaan ku cunno pizza maqaayadda oo aan dadka ka xanaajino, waxaanna isku daynaa inaan ku tarno maqaayadda si aan u sii wadno jiilkeenna. Markaan nahay shaqaale adeeg, waxaan kaligeen la dagaalannaa duqsiyada guriga oo dhan, waxaanan isku daynaa inaan baabiinno annaga oo adeegsaneyna kuraas, qoryo biyo, majarafado iyo alaabo kala duwan oo aan ka heli karno agagaarka si aysan u cunin pizza.
In Fly Simulator, xubin adeeg kaliya ah ayaa la dagaallami kara 10 duqsi. Intaad duqsiga kula dagaalamayso makhaayadda, macaamiishaadu waxay isku dayayaan inay wax cunaan, laakiin maadaama duqsigu yahay mudnaantaada, waxaad sidoo kale ku ridi kartaa kursi iyo majarafad madaxa macaamiishaada si aad duqsiyada u burburiso.
Shuruudaha nidaamka ugu yar ee Fly Simulator waa sida soo socota:
- Nidaamka hawlgalka Windows XP
- 2 GHz processor dual dual (Pentium D ama ka sii fiican)
- Intel HD 4000, Nvidia GeForce 8800, kaarka garaafyada ee ATI 1950
- 1 GB kaydinta bilaashka ah
- DirectX 9.0c kaarka codka ee la socon kara
Fly Simulator Noocyada
Horumar: HFM Games